Sajhasawal.com.np | Homeसुरु भयो अनलाइनबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था, कति लाग्छ ? कसरी लिने ? (स्टेप बाई स्टेप)
पुस १७, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रबारदेखि अनलाइन माध्यमबाट विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेको छ । नयाँ नीतिसंगै श्रम स्वीकृति लिनका लागि नेपालस्थित श्रम कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।